Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Agwaetiti Canary nke La Palma ugbu a mpaghara ọdachi
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nkwupụta mpaghara ọdachi ga -enye gọọmentị Spain ohere itinye nde kwuru nde ego steeti iji kwado usoro ihe mberede na La Palma, ndị bi n'agwaetiti nke nnukwu ọrụ mgbawa ugwu na -emetụta na -emebi agwaetiti ahụ.
Agwaetiti La Palma nke Spanish Canary Islads na -echere igwe ojii nwere ike imebi site na mgbawa ugwu.
Gọọmentị Spanish na -ekwe nkwa nde mmadụ nkwado ka nnukwu ọrụ mgbawa ugwu na -aga n'ihu na -emebi La Palma.
Ugbu a, enwere ike tọhapụrụ nde kwuru nde steeti iji kwado usoro ihe mberede na La Palma, yana ndị ntiwapụ ahụ metụtara.
Gọọmentị Spain wepụtara nkwupụta taa, na -ekwupụta ọkwa gọọmentị Canary Islands'La Palma, nke dị n'ụsọ oké osimiri North Africa,' mpaghara ọdachi '.
Nkwupụta mpaghara ọdachi ga -enye ohere Ọchịchị Spanish iji mee ka ọtụtụ nde euro na ego steeti dị iji kwado usoro ihe mberede na La Palma, ndị bi n'agwaetiti nke nnukwu ọrụ mgbawa ugwu na -emetụta na -emebi agwaetiti ahụ.
Dabere na Ọchịchị Spain Onye nkwuchite ọnụ, gọọmentị ekenyela ngwugwu mbido nke € 10.5 nde ($ 12.30 nde) maka enyemaka ego maka La Palma.
Ihe ngwugwu a gụnyere € 5 nde iji zụta ụlọ, ebe nke fọdụrụ, a ga -ekenye ego maka ịzụta arịa ụlọ na ngwongwo ụlọ dị mkpa mgbe a ga -ebugharị puku kwuru puku.
Lava na -aga n'ihu na -asọpụta site na ugwu mgbawa Cumbre Vieja nke mbụ mepere oghere na Septemba 19 ka ọtụtụ iri afọ nke arụghị ọrụ gasịrị, na -ebibi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ 600 yana ụlọ ụka na ahịhịa unere. Agwaetiti Canary ewu ewu na ndị njem.